सामुहिक हत्या योजनालाई विफल पारेको भेनेजुयली अधिकारीको दावी, कसले हत्या गर्न चाहन्छ यिनीहरुलाई ? – aajnepal
HomeNewsसामुहिक हत्या योजनालाई विफल पारेको भेनेजुयली अधिकारीको दावी, कसले हत्या गर्न चाहन्छ यिनीहरुलाई ?
February 2, 2019 aajnepal News 0
भेनेजुयलाको विपक्षीद्वारा केही सरकार पक्षधर नेता तथा सैनिकको ‘सामुहिक हत्या योजना’ बनाएपनि यसलाई सुरक्षा फौजले विफल पारिदिएको गृहमन्त्री नेस्टोर रिभेरलले बिहीबार बताउनुभएको छ ।
भेनेजुयलाको अतिवादी दक्षिणपन्थी समूहले केही राजनीतिक तथा सैनिक अधिकारीको सामुहिक हत्या गर्न एक समूहलाई तयार पारेको पाएपछि सुराकीको आधारमा उनीहरूको योजनालाई विफल पार्न सरकारी सुरक्षा फौज सफल भएको गृहमन्त्री रिभेरोलको दावी छ ।
‘नेशनल बोलिभरियन आर्म फोर्स (एफएएनबी)’ बाट छुट्टिएका केही सदस्य कोलम्वियाबाट भेनेजुयला आएका भन्ने गुप्तचर अधिकारीले पाएको सूचनाका आधारमा अपनाइएको सावधानी सफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।
सुरक्षाकर्मीले भेल्स देल टुय मा हत्या योजनासाथ आएका एक जना मिगेएल पालासिअस सालसेदोलाई पक्राउ गरेपछि उक्त योजनाको खुलासा भएको गृहमन्त्री रिभेरोलले बताउनुभयो । सालसेदो एफएएनबीबाट सन् २००६ मा छुट्टिएका थिए ।
पक्राउ परेका सालसेदोको बयानका आधारमा सुरक्षाकर्मीले अर्का आरोपित अल्वेर्टो सालाजार कावानसलाई नियन्त्रणमा लिएपनि उनीसँगै रहेका दुई सदस्य भने भागेका गृहमन्त्रीले बताएका छन् ।
यसै घटनाका आधारमा अवकासप्राप्त भेनेजुयली कर्नेल ओसवाल्डो गार्सिया पालोमो र दुई अन्य व्यक्तिलाई बिहीबार पक्राउ गरिएको छ ।सन् २०१८ को अगस्ट ४ मा राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई हत्या प्रयास गरेको आरोपमा प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका पालोमोलाई अत्याधुनिक हतियारसहित गाडीमा यात्रा गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको छ । उनीसँगबाट दुई ए.के. १०३ राइफल, दुई सेटलाइट फोनसहित विभिन्न वन्दोवस्तीका सामान नियन्त्रणमा लिइएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।
पक्राउ परेका उनीहरू भेनेजुयलाको दक्षिणपन्थी समूहद्वारा भाडामा ल्याइएका आपराधिक गिरोहका सदस्य भएको गृहमन्त्रीले बताए ।
भेनेजुयलामा जनवरी २३ मा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुँवा गुएइदोले आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि र अमेरिकाले उहाँलाई मान्यता दिने बताएपछि यहाँको राजनीतिक अवस्था थप जटील बनेको छ ।
भेनेजुएलाका विपक्षी नेता हुवाँ गुएइदोले राष्ट्रपति निकोलास मदुरोप्रति बफादार विशेष प्रहरीले आफ्ना परिवारजनलाई सोधपुछ गरेर मानसिक तनाब दिइरहेको बताउनुभएको छ ।
गत हप्ता आफैँलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका ३५ वर्षीय नेता गुइएदोले आफूलाई पनि सुरक्षा चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
प्रहरीको विशेष टोलीले विपक्षी नेता गुइएदोको घरमा गएर उहाँकी श्रीमतीसँग सोधीखोजी गरेको बताइएको छ ।
गुइएदोले काराकास विश्वविद्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिरहेकै बेला प्रहरी टोलीले उहाँकी श्रीमती फावियाना रोजालेससँग सोधीखोजी गरेको हो ।
राष्ट्रिय सभाका नेता गुइएदोको घोषणाले राष्ट्रपति मदुरोलाई ठूलो चुनौती भएको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
विदेशी समुदायको समर्थन रहेकाले राष्ट्रपति मदुरोका विरुद्धमा विपक्षीहरुले भेनेजुएलामा देशव्यापी प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
मङ्गलबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले गुएइदोलाई देश छाड्न प्रतिबन्ध लगाउँदै सम्पत्ति रोक्का पनि गरिएको जनाएको छ ।